ရာဇ၀င်​ထဲမှာ ဗိုလ်​ချုပ်​ကိုထားခဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ရာဇ၀င်​ထဲမှာ ဗိုလ်​ချုပ်​ကိုထားခဲ့	6
Posted by naywoon ni on Feb 8, 2015 in Poetry |6comments
ဟိုနားတစစ်​ ဒီနားတစ်​စ ပဲ
တစ်​ချိန်​တုန်းက လူငယ်​တစ်​​ယောက်​ရှိ​လေသတည်း ။
သူ့အမည်​နာမက ​အောင်​ဆန်းဟု အမျာကသိ​လေ၏ ။
ရာဇ၀င်​ပုံပြင်​ ထဲက ဇာတ်​​ကောင်းအလားဖြစ်​ရ ။
ရာဇ၀င်​ထဲမှာ ဗိုလ်​ချုပ်​ကိုထားခဲ့လို မဖြစ်​​သေးပါဘူး​လေ ။
အလင်းဆက် says: သူရဲကောင်းဆိုတာ..လိုသလောက် မရတဲ့ ရှားပါး ရတနာပါဆို…
မြစပဲရိုး says: ထားခဲ့ဘူး။
. နောက်တစ်ယောက် တောင် ထပ် လိုချင်တာပါ။
. လောကကြီး ရယ် …..
ဒီလောက် သိန်းပေါင်းများစွာသော အစိမ်းရောင်တွေ ထဲ က
ကျွန်မတို့ သူရဲကောင်း ကြီး နဲ့ နဲနဲတူတာလေး တစ်ယောက်လောက်ကို တောင် မစွန့်ကြဲချင်လား။
သူရဲကောင်းဆိုတာ ဘရိန်းဝပ် လုပ်ခံထားရတဲ့ အဖွဲအစည်းကနေ ထွက်ပေါ်ရိုးထုံးစံမရှိလို့။
Mike says: .ကိုနေ၀န်းနီရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကဗျာလေးအတွက် လေးစားပါတယ်…
.ကျုပ်လည်းပဲ ဗိုလ်​ချုပ် အကြောင်းတွေဖတ်ရတိုင်း​ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလားလို့တွေးမိတတ်တယ်
.အံ့ဘွယ်လူသားတစ်ဦးပါပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: မောင်ထိန်လင်းမွေးတော့.. ၁၉၁၅
၁၉၃၆မှာ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ… ဆိုတော့… အသက်က.. ၂၁နှစ်…။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဌဖြစ်တော့.. ၁၉၃၇.. အသက်. ၂၂။
၁၉၄၀မှာ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး အထေထွေအတွင်းရေးမှုး.. ဆိုတော့.. အသက်က.. ၂၅နှစ်။
ရဲဘော်သုံးကျိတ်.. ၁၉၄၁ ဆိုတော့… အသက်က.. ၂၆နှစ်…။
ဂျပန်အ၀င်မှာ.. ဗမာစစ်တပ်အကြီးအကဲဖြစ်တော့.. ၁၉၄၃… ဆိုတော့.. အသက်က.. ၂၈
ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တော့.. ၁၉၄၇ …သူ့အသက်က.. ၃၂..။
ကျဆုံးတဲ့အချိန်မှာ..တိုင်းပြည်အကြီးအကဲ… အမျိုးသားခေါင်းဆောင်… အသက်၃၂နှစ်…။
အခု စစ်ကြောင်းချီတက်နေတဲ့ကျောင်းသူားများကို.. ကလေးတွေလို့.. မခေါ်ကြစေလို..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ကျ​နော်​က နှစ်​တစ်​ရာအတွင်း သူ့လိုလူ ထပ်​မ​ပေါ်​ပေါက်​လို့ စိတ်​ထဲကြိတ်​မနိုင်​ခဲမရဖြစ်​လို့ ဒီကဗျာ​လေး ​ရေးဖြစ်​တာ ။ အာဇာနည်​နဲ့ သူရဲ​ကောင်း ​ပေါများရာ တိုင်းပြည်​မှာ ဗိုလ်​ချုပ်​လို လူတစ်​​ကြောင့်​ ဘာ​ကြောင့်​ ထပ်​မ​ပေါ်​ပေါက်​​တော့တာလဲဟင်​ ¿ မဆီမဆိုင်​ သူကြီးရဲ့ ကျိမ်​စာကြီးကိုလည်းသတိရမိပါရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.